कला/साहित्यबुधबार, ३ आश्विन , २०७५
बलिउड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन र आमिर खानको अभिनय रहेको 'ठग्स अफ हिन्दुस्तान' यस वर्षकै बहुप्रतीक्षित फिल्म बनेको छ। यसैबीच फिल्ममा सबैभन्दा ठूलो 'ठग' रहेका अमिताभको फिल्मी लुक सार्वजनिक गरिएको छ।
एक्सन-एडभेन्चर जनराको यस फिल्मको सुटिङ शुरु भएदेखि नै अमिताभ र आमिरको लुक लिक भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कैयौं तस्वीर बाहिरिने गरेको थियो, तर हरेक पटक त्यो सही नरहेको ठहर हुन्थ्यो। यसपाली भने यशराज फिल्म्सले अफिसियल रुपमा अमिताभको फिल्मी अवतार सार्वजनिक गरेको हो।
'ठग्स अफ हिन्दुस्तान' मा अमिताभ 'खुदाबक्श' को भूमिकामा देखिनेछन्। उनको खुदाबक्श लुक पानीजहाजमा उभिएको देखाइएको छ। रिलिज गरिएको मोशन पोस्टरको शुरुवात उडिरहेको बाजबाट हुन्छ। खुदाबक्शको लुकमा अमिताभ सेताम्मे दाह्री-जुँगासहित तथा हातमा तरबार लिएर देखिएका छन्।
यसैबीच, फिल्मको अर्को पात्र 'जाफिरा'को रुपमा देखिने फातिमा सना शेखको मोसन पोस्टर पनि यशराज फिल्म्सले सार्वजनिक गरेको छ।
पोस्टरमा फातिमालाई आगोसँग खेल्दै धनु-काणको निशाना ताकिरहेको देखाइएको छ। उनको 'जाफिरा' अवतारलाई आगो जस्तै तेजस्वी, जो निकै प्रतिभाशाली सेनानी र धनु-काणबाट युद्ध गर्न माहिर भनिएको छ। आमिर खानले पनि पोस्टरको लिङ्क ट्विट गर्दै लेखेका छन्, "योद्धा ठग ! यिनको निशानाबाट बच्नू!!"
यो फिल्म लेखक फिलिप मिडोस टेलरको उपन्यास 'कन्फेशन्स अफ अ ठग' (सन् १८३९) मा आधारित छ। फिल्मको छायांकन युरोपेली मुलुक माल्टाका साथै भारतकै राजस्थानमा गरिएको छ। 'ठग्स अफ हिन्दुस्तान' लाई डिजिटल रूपमा आइम्याक्स फर्म्याटमा बनाइएको छ, जुन यो प्रविधिमा बनाइएको पाँचौं भारतीय फिल्म हो। यसअघि 'धूम ३', 'ब्याङब्याङ', 'बाहुबली २' र 'पद्मावत' यो प्रविधिमा बनाइएको थियो।
विजय कृष्ण आचार्यले निर्देशन गरेको 'ठग्स अफ हिन्दुस्तान' ८ नोभेम्बरमा रिलिज हुनेछ। - एजेन्सी